बामदेव फेरि प्रचण्ड कित्तामा ? - नेपालबहस
बामदेव फेरि प्रचण्ड कित्तामा ?
| १३:४१:४१ मा प्रकाशित
२४ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आत्मालोचना गरेपछि साम्य भएको नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो फेरि बल्झने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा आत्मालोचना गदै पार्टीलाई आइन्दा विधि पद्धतिमा चलाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि व्यावहारमा लागू गर्न आनाकानी गरेपछि फेरि भैंसेपाटी गठबन्धन बौरिने संभावना बढेको छ ।
एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीको कित्तामा पुगेको भनिएका पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम आज पल्टिएका छन् । आज बस्न लागेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सहमतिको प्याकेज आउने सभावना न्यून देखिएपछि उनी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार पुगेका छन् ।
भेटमा गौतमले आफू अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कित्तामा गइनसकेको भन्दै सहमति कायम नभएपनि पुरानै गठबन्धनमा रहने सन्देश दिएका छन् । ओलीले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए । तर भोलिबाट सुरु हुने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउने तयारी नभएको बुझेपछि गौतम भड्किएका हुन् ।
म ओलीको कित्तामा गइसकेको भनी गरिएको प्रचार मित्थ्या भएको पनि उनले प्रचण्डलाई प्रष्ट्याए । यस्तै ओलीले हिजो पार्टीका तीनजना शीर्ष नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँगको भेटमा पनि एक पद एक व्यक्ति अनुरुपको प्रस्ताव ल्याउने संकेत नगरेपछि सशंकित भएका थिए । पूर्व माओवादी र नेपाल पक्षीय नेताहरु हिजो दिनभरि नयाँ रणनीति बनाउन व्यस्त थिए ।
आज ३ बजे बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने अजेण्डा अहिलेसम्म तयार नभएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ । भोलिदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकको अजेण्डा तयार गर्न ओलीले प्रचण्ड र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अह्राएका छन् । तर शनिबारको सचिवालय बैठकको मर्म विपरित अजेण्डा तयार गर्न लागेको आभाष पाएपछि सबै सशंकित भएका हुन् ।
साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई कर्जा दिने गरी मेगा बैंक र भोटेवहाल तयारी पोशाक उत्पादन तथा बिक्रेता संघबीच सम्झौता १ दिन पहिले
प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी अन्त्य ४ दिन पहिले
अनलाइन कक्षाले युट्युबमा पढ्ने सामग्री खोज्न थाले विद्यार्थी १ हप्ता पहिले
कृषिउपजमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ६ दिन पहिले
चलचित्र ‘घिन्ताङ’ मा केकी अनुवन्धित २ हप्ता पहिले
शहीद स्मारक लिग : च्यासल युथ क्लब विजयी १ वर्ष पहिले
जिल्ला अस्पतालमा औषधि अभाव २ वर्ष पहिले
तीव्र विकासमार्फत जनतालाई सुखसुविधा उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ : प्रम ओली १ वर्ष पहिले
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका दुवै समूह एकै ठाउँमा २ महिना पहिले